I-5 - NB MLK Jr Way to NE Ravenna Br - Pavement Repair & More - Revive I-5 Seattle project information in Somali | WSDOT
Home » Projects » I5 » MLKtoRavennaPaveRepair » I-5 - NB MLK Jr Way to NE Ravenna Br - Pavement Repair & More - Revive I-5 Seattle project information in Somali
I-5 - NB MLK Jr Way to NE Ravenna Br - Pavement Repair & More - Revive I-5 Seattle project information in Somali
Northbound I-5 Martin Luther King Jr. Way ilaa NE Ravenna Blvd
Muddada gi’ga iyo xagaaga 2018, Waaxda Gobolka Washington ee shaqaalaha qandaraaslaha gaadiidka waxa uu dib u samayn doonaa ugu dhawaan 13 mayl northbound I-5 u dhexaysa Martin Luther King Way iyo Northeast Ravenna Boulevard.
Waxay shaqan doonaa:
Beddela 37 isku xidhayaasha kala baxa ee biriishka.
Beddelo qaybo badan oo lakabyada sabbada ah.
Ridqid iyo dib u dhigid laamo jidka waddada.
Badanka shaqadu waxay dhici doontaa habeenka, laakiin mashruucan waxa uu sidoo kale u baahan yahay xidhitaan labba todobaad ah ee northbound 1-5 laga bilaabo West Seattle Bridge ilaa Yesler Way. Intaa waxa dheer, kuwan waxay noqon doontaa dhamaayada todobaadka afar ah halka labba haad oo keliya ay u furnaan doonaa jidka.
Muddada lixda dhammaadka todobaadka ee shaqo, shaqaalahu waxay bilaabi doonaa xidhitaanada daaha ah ee habeenka Jimcaha oo waxay dhammaystiri doonaan subaxda safarka ee Isniinta ah. Shaqada waxay ku tiirsantahay jawiga hawada kaas beddeli karta taariikhda xidhitaanka.
Jadwalada xidhitaanada la qorsheeyay:
Abriil 20-23 (Labba haad oo furan)
Maayo 11-14 (Labba haad oo furan)
Maayo 18-21 (Labba haad oo furan)
Juun 1-4 (xidhitaanka buuxa ee northbound)
Juulay 13-16 (xidhitaanka buuxa ee northbound)
Ogosto 10-13 (Labba haad oo furan)
October 12-15 (Labba haad oo furan)
Hore U qorhsee
Laga reebo daahitaanada wayn ee gobolka oo dhan. WSDOT waxay u bu baahantahay caawimadaada in gaadiidka gobolka ay socdaan muddada dhismahu socda.
Fadlan ka feker warbixinaha soo socda:
Daahida ama safarada dib u qorshaynta ikhtiyaarka ah.
Safar ka hor 8 subaxnimo ama ka dib 8 galabnimo haddii ay suuragal tahay.
Qaado safarka taransitka ama gaadiidka la wada raaco.
Isticmaal jidadka kale sida jidadka gobolka 99, 599, 518, 509 iyo I-405, laakiin taageerooyinka iyo daahitaanada waa la filayaa.
Sababta aan shaqadan u qabano
I-5 xidadka gaadiid raaca ugu muhiimsan ee Washington oo waxay ka badan tahay 50 sano jir. Shaqadan waxay caawin doontaa inay isku haleeyaan dadka ku safaraa iyo jiidayaasha shixnadaha ku tiirsan maalin kasta.
REVIVE I-5 MACLUUMAADKA: